ज्यूँदै मृत घोषणा गरिएका बिरामीको उपचारखर्च सबै अस्पतालले व्यहोर्ने सहमति – Health Post Nepal
ज्यूँदै मृत घोषणा गरिएका बिरामीको उपचारखर्च सबै अस्पतालले व्यहोर्ने सहमति
२०७७ असोज १६ गते ११:१५
ज्यूँदै मृत घोषणा गरिएका लक्ष्मीकुमारको सबै उपचार खर्च डा. इवामुरा अस्पतालले बेहोर्ने व्यहोर्ने भएको छ। इन्डोस्कोपी गर्ने बित्तिकै कोमामा पुगेका लक्ष्मीकुमार लाखाजुको सम्पूर्ण उपचार खर्च अस्पतालले व्यहोर्ने गरी सहमति भएको हो।
बिहीबार डा. इवामुरा अस्पतालमा इन्डोस्कोपी गर्न पुगेका लाखाजुलाई अस्पतालले मृत घोषणा गरिदिएको थियो। त्यसपछि नर्भिक अस्पतालमा पुर्‌याइका उनी जीवितै प्रमाणित भए।
तर, अवस्था एकदमै नाजुक भइसकेकाले उनी अहिले कोमामा छन्। त्यसपछि परिवार र छिमेकीले डा. इवामुरा अस्पतालमा बिहीबार धर्ना दिएका थिए।
धर्नासँगै अस्पताल प्रसाशनसँग भएको वार्तामा अस्पतालले विरामीको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने गरी सहमति भएको धर्नामा बसेका रत्न चवालले जानकारी दिए।
बिहीबार राति अबेरसम्मै अस्पताल प्रसासनसँग भएको वार्तामा अस्पतालले उपचार खर्च बेहोर्ने सहमति भएपछि धर्ना पनि सकिएको छ।लक्ष्मीकुमार पेसाले सिकर्मी हुन्। भक्तपुर नगरपालिका–९ च्याम्हासिंहमा उनले सन्चालन गर्ने फर्निचर पसलले उनको घरपरिवारको चल्दै आएको छ।
अस्पतालको लापरबाही र चिकित्सकको हेलचक्र्याँइले इन्डोस्कोपी गर्दा भित्री अंगमा असर पुग्यो र लाखाजु अन्तिम अवस्थामा रहेको परिवार स्रोतले जनाएको छ।
इन्डोस्कोपी गर्दागर्दै इवामुरा अस्पतालले ‘एक्सपायर्ड’ भन्दै ‘मृत्यु–प्रमाणपत्र’ दिएको थियो। त्यसपछि आत्तिएका उनका भाइ विजेस लाखा र छोरा नविनले तत्कालै अर्को अस्पतालमा लैजान जोडबल गरेपछि थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा लगिएको थियो।
नर्भिक अस्पतालले ज्यूँदै रहेको भन्दै अहिले भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गरिरहेको भाइ विजेस लाखाले बताए। नर्भिक अस्पतालले रगतको प्रवाह रोेकिएका कारण मस्तिष्कमा क्षति पगेकोले ‘यसै भन्न नसकिने’ भनेको छ।
स्थानीय रत्नश्वरी चवालका अनुसार छिमेकीले पटकपटक अस्पतालसँग उनको अवस्थाको बारेमा सोधेका थिए। ‘के भयो, कसरी भयो?’ भनेर बुझ्ना खोज्दा अस्पतालले जवाफ दिएन र उनलाई भेट्न पदि दिएन। त्यसपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको उनले बताइन्।
‘एउटा ज्यूदैँ मान्छेलाई मर्‍यो भनिदिने अनि त्यस्तो सकुशल मान्छे सिधै कोमामा पुग्नेगरी कस्तो उपचार गरेको?’ उनले भनिन् ‘हामीलाई बिरामीको अवस्था बुझ्ने अधिकार त छ नि। त्यो पनि दिइएन।’
डा‍. इवामुरा अस्पताल भक्तपुर